के तपाईंको सेभ नम्बर डिलेट भयो ? यसो गर्नुहोस्……. – Makalukhabar.com
“स्मार्टफोनबाट कन्ट्याक्टसहरु डिलेट भएमा अब चिन्ता लिनु पर्दैन । गुगलको सहयोगमा तपाईँले डिलेट भएका नम्बर सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । गुगलको सहयोगले गुगल ड्राइभमा सेभ भएका नम्बरहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि तलका चरणहरु अपनाउनुहोस्:
३ .त्यस पश्चात् आफूलाई जुन समय भित्र डिलिट भएका वा परिवर्तन गरिएका सम्पर्क नम्बरहरु पुरानै अवस्थामा चाहिएको हो, सोही अनुसारको समय छानेर रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ । यस प्रकार तपाईंले डिलिट वा इडिट भएका सम्पर्क नम्बरहरु पुनः प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने तपाईंले ३० दिन भित्रमा डिलिट भएका कन्ट्याक्स रिस्टोर गर्नैपर्दछ । अन्यथा रिस्टोर गर्न सकिँदैन ।”